I-Bartlett Condo; Iimbonakalo ezintle, ukufikelela kwiResort
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguBill
Ifakwe kwenye yeendawo ekuchithelwa kuzo iiholide zeNkulumbuso yaseMount Washington Valley, le 1 BR condo yeyona ndawo ifanelekileyo yokuya ngempelaveki yosapho okanye ukubaleka kwezothando. Yonwabela yonke into enokunikelwa yi-MWV emva koko ubuyele ekhaya kwindawo epholileyo ukuze uphumle kwaye uphumle. Ufikelelo kwizibonelelo ezigcweleyo ekuchithelwa kuzo iiholide ziyafumaneka (intlawulo yokongeza), kubandakanywa. amachibi, igumbi lokuphumla, iindledlana kunye nokunye. Imizuzu ukusuka Storyland kunye Jackson Village. Umgama nje omfutshane ukuya kwiindawo ezininzi zokuhla kunye neendawo zokutyibiliza zelizwe x kunye nokuthenga simahla kunye nokutya eNorth Conway.
Kukho indawo yokupaka eninzi ngaphandle kweyunithi kwindawo ekwabelwana ngayo.
Ilali yaseNordic yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokuchithelwa iiholide zosapho kwiMt Washington Valley. I-Condo yethu yindawo yokugqibela, ebekwe kwesinye sezona zakhiwo ziphakamileyo kwipropathi. Inika iimbono ezintle kuwo onke amaxesha ama-4.
Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide ibonelela ngezinto ezininzi zosapho, kubandakanya iiphuli ezi-3 kunye neeJacuzzis ezi-2. Ezi ziyafumaneka kwiindwendwe zethu ngomrhumo owongezelelweyo wemihla ngemihla oquka usapho lonke. Umrhumo uhlawulwa ngokuthe ngqo kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide kwaye uhlawulela kuphela iintsuku ozisebenzisayo.
Izinto eziluncedo ezifana nenkundla yentenetya kunye nebhola yomnyazi, ibala lokudlala, iziko losapho (ezinemidlalo yetafile, iincwadi, indawo yokucima umlilo, kunye nedama lokutyibiliza) ziyafumaneka ngaphandle kwentlawulo. Iigrill zamalahle kunye neetafile zepikiniki ziyafumaneka kuwo wonke amabala. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide yakha ngokutsha kwaye yahlaziya inkqubo yabo yabucala efikeleleka ngokulula ukusuka kwi-condo.
Sihlala sihlala kwindawo kwaye sijonge iyunithi emva kokuphuma.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bartlett